]Igwe nkwakọ ngwaahịa swiiti maka ọrịre | Yinrich
Ụlọ > Ngwaahịa > Igwe ngwunye swiiti
Nkeigwe nkwakọ ngwaahịa swiiti bụ ụdị ngwa ngwa ngwa ngwa, otu igwe nwere ọtụtụ ọrụ, ọ nwere ike ibukọ swiiti ngwa ngwa na batches. Igwe mkpuchi swiiti akpaka na-adịkarị mfe ịrụ ọrụ, dị mfe ihicha, ọ dị mfe idobe, ọnọdụ ziri ezi, ọsọ dị elu na kwụsie ike, ọ dịkwa mfe ịgbanwe ngwaahịa nke nkọwa dị iche iche. Iji igwe nkwakọ ngwaahịa swiiti akpaka nwere ike belata ọnụ ahịa mmepụta ma melite arụmọrụ mmepụta.
Maka ọnụahịa igwe na-akwakọ ngwaahịa swiiti, ekwesịrị ikpebi ya dị ka ụdị azụrụ na ihe ahaziri ahazi. Ka ọ dị ugbu a, igwe na-akwakọba swiiti na-agụnyekarị igwe na-ebukọ ohiri isi swiit, igwe na-ekpu swiiti okpukpu abụọ, na ụdị ndị ọzọ, yana igwe akpaaka swiiti na igwe na-ebu candy akpaaka. Yinrich na-enye ọrụ nhazi igwe eji akwa swiit iji gboo mkpa dị iche iche nke ndị ahịa, nabata ịkpọtụrụ!
Igwe eji akwa ụdị ohiri isi ahaziri maka ndị na-emepụta Marshmallow sitere na China
]Yinrich Technology ahaziri ụdị ihe nkwakọba ihe ohiri isi maka ndị na-emepụta Marshmallow sitere na China, ụlọ ọrụ confectionery dị elu na igwe nhazi chocolate.Sw-Pillow Ụdị nkwakọ ngwaahịa maka Marshmallow.
QZB500 Swiiti ịcha na igwe mkpuchi ihe
]Igwe mkpuchi swiit a bụ PLC na-achịkwa akpaghị aka;Mmanya akpaaka na nkesa ịsa ahụ. A na-edobe ihe a na-akpọ lutricant n'ime traị nke mbughari.Mgbanwe nha na mmalite ọrụ dị ngwa ngwa.Ndochi nke ọkọnọ akwụkwọ-wheel dị mfe. Enwere ike ijikọ ya na ahịrị mmepụta.Ọ na-eme ka arụmọrụ dị mma, ịdị ọcha.
N'ogbe QNB500 Cutting na Double Twist Candy Packing Machine nwere ezigbo ọnụ ahịa - Yinrich Technology
]Yinrich Technology N'ogbe QNB500 Ịcha na Ugboro abụọ Twist Candy Packing Machine nwere ọnụ ahịa dị mma - Yinrich Technology, otu afọ na-enye ihe nchekwa.QNB500 Ịcha na igwe na-ebukọ swiiti ugboro abụọ.
Igwe Lollipop bọọlụ okpukpu abụọ
]bọọlụ lollipop okpukpu abụọ na-ebukọ ngwongwoNke a bụ igwe eji akwa akwa emepụtara ọhụrụ emebere maka ụdị lollipops bọọlụ.Ọ bụ nnukwu ọsọ na ọrụ a pụrụ ịdabere na ya.